Zvapupu zvaJehovha Zvinowanepi Mari Yokuita Basa Razvo? | Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lambya Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Basa redu rokuparidza rinotsigirwa nezvipo zvinopiwa neZvapupu zvaJehovha. Patinoita misangano yedu hapana ndiro yemari inofambiswa uye hapana anonzi ngaabvise chegumi. (Mateu 10:​7, 8) Asi tine mabhokisi okuisa zvipo anenge aripo panzvimbo dzatinonamatira okuti anoda hake anogona kupa chipo. Hapanyorwi mazita okuti nhingi ndiye abvisa mari yakati.
Chimwe chinoita kuti tisava nezvinhu zvakawanda zvokubhadhara inyaya yokuti hatina vakuru vesangano vanonzi vanofanira kubhadharwa. Uyezve Zvapupu hazvibhadharwi pakuita basa rokuparidza paimba neimba, uye nzvimbo dzatinonamatira hadzisi dzemaoresa.
Zvipo zvose zvinopiwa zvinotumirwa kuhofisi yebazi yeZvapupu zvaJehovha uye zvinoshandiswa pakuyamura vanenge vawirwa nenjodzi dzinongoerekana dzaitika, kutsigira mamishinari edu nevatariri vanofambira, kubatsira pakuvaka dzimba dzokunamatira munyika dziri kusimukira uye kupirinda nokutumira maBhaibheri nemamwe mabhuku echiKristu.
Munhu mumwe nomumwe anozvisarudzira kana achida kupa zvipo kuti pabhadharwe zvinhu zvinodiwa, kutsigira basa redu rinoitwa pasi rose kana kuti zvose zvinodiwa. Ungano imwe neimwe inoudza vatendi vari muungano yayo kuti imarii iripo uye imwe yakashanda sei.
Tinogona kushandisa nguva yedu, simba uye zvimwe zvinhu zvedu kutsigira basa rekuparidza Umambo.
Vhidhiyo Pfupi: Zvapupu zvaJehovha Zvinowanepi Mari Yokuita Basa Razvo?
Ona kuti basa redu rinotsigirwa sei uye zvipo zvinobviswa sei pasi rose.
Zvapupu zvaJehovha Zvinowanepi Mari Yokuita Basa Razvo?